Awood Socota - Wikipedia
Maqaalka Muhimka ah ee qaybtaan, kaasoo lafilayo in uu ahaado ciwaankiisa Awooda Socota, ilaa iyo hadda diyaar maaha. ku soo dhowoow si aad u-sameyso oo aad gacan uga gaysato.
Hilaacu waa nooc ka mid ah Awooda, waxaa loo yaqaanaa Awooda Korontada.
Awooda Socota (ingiriis: Kinetic Energy) awooda socota ee shay ama walax waa awooda uu leeyahay socodkiisa darteed. Waxa lagu qeexaa awooda socota in eey tahay shaqada ka dhaqaajineeysa shay leh cuf meel ilaa meel kale.
Guud ahaan, noocyada awooda intooda u badan waa la isku bedeli karaa ayadoo la isticmaalayo habab kala duwan. Awooda korontada waxaa loo bedli karaa awood kul, awood cod iyo awood iftiin iyo noocyo kale oo badan. Laakiin waxaa jira noocyo badan oo awooda ka mid ah oon la bedeli karin, sida awooda awooda cufisjiidadka lama bedeli karo.
Si waafaqsan heshiiska Nidaamka Caalamiga ee Halbeega ee loo yaqaano SI, magaca halbeega lagu cabiro awooda dhamaanteed waa Juul oo astaantiisu tahay j; inkastoo qeybaha kala duwan ee awooda loo isticmaalo cabir halbeegyo kala duwan. Tusaale ahaan, dhererka waxaa lagu cabiraa mitir, awooda socota ee dhererka waxaa lagu cabiri mitir-juul.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Awood_Socota&oldid=220399"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2021, marka ee eheed 12:08.